Wasaaradda caafimaadka Puntland oo lagu wareejiyey Database Online ah kaas oo | Puntland Ministry of Health
Wasaaradda caafimaadka Puntland oo lagu wareejiyey Database Online ah kaas oo
Markay taariikhdu ahayd 13 Maajo, 2017 waxaa Wasaaradda Caafimaadka Puntland lagu wareejiyey Software Online ah oo loo isticmaali doono warbixinta maaraynta caafimaadka ee heer Degmo (DHIS2). Borogaraamkan ayaa ah mid aad casri ah ayna isticmaalaan in ka badan 47 dal iyo 23 urur kuwaas oo ku kala yaalla 4 qaaradood oo adduunka ah.
Wasiirka caafimaadka Puntland Cabdinaasir Cuuke oo goob joog ka ahaa xilwareejinta ayaa aad u ammaanay borogaraamkan casriga ah kaas oo 47 waddan oo caalamka ah laga isticmaallo. Waxaanu wasiirku sheegay in borogaraamkani wax weyn ka taridoono warbixinaha wasaaradda caafimaadka kuwaas oo markii hore qaab kale lagu soo gudbin jirey laakiin qaabkan onlineka ahi uu ka dhigi doono warbixinaha kuwo si sahlan iyo wakhti kasta la helikaro. Wuxuu wasiirku aad ugu mahadceliyey Hay’adda UNICEF oo ah hay’addii ay wasaaradda caafimaaadka iska kaashadeen soo saarista borogaraamkan. Waxaa kaloo wasiirku aad ugu mahad celiyey shaqaalihii wasaaradda caafimaadka Puntland ee gacanta weyn ku lahaa soo bixitaankii borogaraamkan,
Waxaa isna goobta ka hadlay maxada Maaraynta caafimaadka ee heer degmo Sharmaake Xasabn Cali oo isna sheegay qaababkii uu soo maray borogaarmamkani iyo guusha laga gaadhay.
Waxaa isna goobta ka hadlay Muhsin oo ka socdey UNICEF kaas oo sheegay in ay guul weyn u tahay UNICEF iyo Wasaaradda caafimaadka Puntland dhamaystirka borogaraamkan kaas oo ah mid casri oo Putland wakhti ku habboon laga hirgeliyey.
Waxaa ugu danbayntii halkaa shahaadooyiin lagu guddoonsiiyey shaqaalihii Unicef iyo wasaaradda caafimaadka ee borogaraamkan hirgeliyey,